Falanqayn-Fariinta Axmed Gadone W/Q Idiris A.Dooxa-joog |
Falanqayn-Fariinta Axmed Gadone W/Q Idiris A.Dooxa-joog
Amiirka Xarakadda Al-shabaab Al-mujaahidiin Axmed Cabdi Godane Alshabaabka dhexdoodana looga Yaqaan Mukhtaar Abuu subayr Waxaa uu ka soo diray halka uu joogo Fariin uu u diray Dadka Soomaaliyeed ee ka tirsan Xarakadda Al-shabaab ee Axmed Godane Hoggaamiyaha u yahay .
Haddaba Maxaynnu ka arkaynaa Fariinta Axmed Godane? Inta aynnaan Faalaynta Fariinta guda Galin aan xusno in Axmed Gadone uu horay usoo diri jiray fariimo Codad ah bal waxaa jira in tannu ka duwan tahay kuwi hore ee uu soo diri jiray , Waxa middaan ka muuqday Hab cusub .
Fariintu waxay tilmaamaysaa Khilaafka ka dhex taagan madaxda ugu saraysa Al shabaab ee dhowaan dagaaladda dhexdooda ah sababtay , Sidoo kale waxay muujinaysaa in Al-shabaab ay u diga rogan doonnaan deegaano kale oo Soomaaliya ka mid ah , iyo in koox odayeedyadda Koonfurta Soomaaliya ee Al shabaab taageeraayey taageeradoodu hoos u dhacday .
Amiir Gadone waxa uu ku dheeraaday ka wacyi-galinta Al shabaabta dhexdoodda is-khilaafka iyo amardiiddada , Kolkaas waxaa iswayddiin Mudan Maxaa keenay In goortaan Khilaaf iyo amardiido ka dhex aloosanto Al shabaab ? Waa tu aynnu oran karo waxaa sabab u ah wiiqanka Al-shabaab ay ku taagdaraysteen Dagaaladda ay kula jiraan Ciidamadda Amison ee ka socda dalal dhowr ah oo Afrika ka tirsan , Jabka ka soo gaaray dagaalka ee Al shabaab ay ku jabeen loogana qabsadday gobollo badan oo ay horay u maamulayeen waxa uu dhaliyey in Hoggaamiyayaasha Sarre ee Al Shabaab oo uu u sarreeyo Axmed Godane ay kala aragti duwanaaddaan .
Kala aragti duwanaanshaha waxaa keenay in guul-darooyinka la soo gudboonaaday Kooxda Al shabaab , waa tu dabiici ah kolka dhibaado koox ku dhacdo in dhexdoodda uu khilaaf yimaado sababta oo ah isbadalka ku dhacay waaqiciga ayaa noqonaaya mid saamayntiisa yeesha .
Tan kale ee ah in ay diga roganayaan ayaan la garan karin halka ay u diga-roganayaan taas oo macnaheeddu yahay in ay xoogoodda gayn doonnaan deegaano cusub oo Soomaaliyeed sida uu sheegay Axmed Godanena ay dhici doonto waa sida uu saadaalinaayee in Koox odayeedyo (Qabiilo) aan hadda taageersanayni ay taageeri doonnaan Xarakadda
Dhanka kale waxa ka muuqday Fariin dabacsanaan ku aaddan in Amiir Godane ku qaabaayo in aan Xarakaddu Daadin doonin dhiiga dadka muslimiinta ah ! Waxaa halkaan ka imaanaysa Dadki Hore ee Xarakaddu dishay oo ay u laysay si waddareed sida dhalinyarraddi qalin jabinaysay oo kale miyay ka waantoobeen Xarakaddu mise waxay fariintu ka hadlaysaa in aysan dhexdooda islayn Al shabaab .
Yeeritaanku waxa uu muujinaayey in loo dhimriyo dhamaan dadka Muslimiinta ah ee Soomaaliyeed kolka laga reebo Gaaladda iyo Gaallo Raacyadda waa sida uu u dhigay Amiir Godane ‘e.
Waxaynnu Isywaddiinyanaa Fariintu ma tahay mid tilmaamaysa Jabitaanka Al shabaab ay ku jabeen dagaaladda ay kula jiraan Cida ay Cadoowgooda u arkaan ? Tu kale ayaa ah Al shabaab maxay Jabitaanka ay dagaaladda ku guuldaraysteen saamayn cayn kee ah ayay ku leeyihiin Madaxdeeddu ?
Waa Hubaal in Al shabaab ay is-nacsiiyeen badanka Dadka Soomaaliyeed ka dib kolki ay ku sifoobeen kuwo aan waaqiciga wax ku cabirayn ee kali ah ku taagan dariiqa cabsi galinta iyo Caburinta , Sidoo kale waxay Al shabaab ku kaceen falal soo dadajiyey in Soomaaliddu u arkaan Nacabkooda , waxaa falalkaas ka mid ah qaraxyo lala beegsaddo dad aan lug ku lahayn dhaqdhaqaayadda siyaasaddeed ee Dalka Soomaaliya.
Si urursan haddii aan u dhahno Xogta Fariintu xambaarsan tahay ee uu Gudbinaayo Axmed Godane waa mid tilmaamaysaa in Alshabaab wiiqeen sidoo kale ay haatan ogaaddeen waxyaabo badan oo kolki hore ay iska indho saabayeen sida in jujuub iyo wadda tashi la’aan ay u fuliyaan howlaha ay waddaan ee ay ugu yeeraan Gaallo la dagaalanka , Bal saameeyey dadka Soomaaliyeed oo Al-shabaab ka dhex fuliyeen Falal ka dhan ah doonitaankooda.
Maxay haatan Fariinta Axmed Godane ee is-dabcinta laga dheehan karay ka badali kartaa Xaalka Xarakadda Al shabaab ? Al-shabaab dib ma u helli karaan Taageero dadka Soomaaliyeed ay ka hellaan ? Dib ma u agaasimi karaan awood ciidan oo ay doonitaankooda ku fuliyaan ?
Wiiqitaanka Al shabaab ku wiiqmeen dagaaladda ee looga mahoobiyey Gobollo badan oo ay horay u haysteen ee haatan ku qasabtay in ay is-dabciyaan saw ma lama oran karo iyaga ayaa sidaas in ay u dhacdo sameeyey ?
Badanka Dadka Soomaaliyeed Al-shabaab waxay u arkaan cadoowgooda kolkaas soo noqoshadda Als ahbaab waa tu adag saw lama oran karo ? In ay soo noqdaan oo ay dib Al Shabaab u xoogaystaan waa dhibaatadda Soomaaliya oo sii daba-dheeraata miyaa ? Al shabaab haddii laga adkaato guud ahaan oo meesha ay ka baxaan maxaa dhici doona ? Ma waxaa soo laabanaysa si gaara Koonfurta Soomaaliya Qabqable qabyaaladdeed ?
Falanqayntu ma ahan tu ka turjumaysa Rabitaanka Qoraha,Looma Fasiran karo Doonitaan ee waa mid ku eg faalayn oo kali ah , Waxaynnu eegaynaa sababta ka dambaysa dhacdada iyo saamaynta dhacdadu leedahay , u fiirsasho u guur-galid leh ayaynnu u fiirsanaynaa dhaqdhaqaayadda , isbadaladda, sababaha ay u dhacayaan Isbadalladu IWL .